Fanindroany izao: nisy naka an-keriny indray ilay Karana Navaze Veldjee | NewsMada
Omaly tokony ho tamin’ny 9 ora maraina, raha iny izy hivoaka ny trano fonenany, etsy Soavimbahoaka iny, nalain’ny jiolahy nirongo basy an-keriny… indray, ny mpandraharaha karana, i Navaze Veldjee. Fanindroany izao ity teratany karana ity no niharan’ny fakana an-keriny tahaka izao.
Karana mpandraharaha mizaka zom-pirenena frantsay i Navaze Veldjee, 47 taona, tompon’ny orinasa Vel’Optic. Raha iny nivoaka ny trano hamonjy ny toeram-piasany iny izy no nalain’ny jiolahy miisa efatra nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika, 50 metatra miala ny tranony eny Soavimbahoaka, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny fikambanan’ireo teratany karana mizaka zom-pirenena frantsay monina eto Madagasikara (CFOIM). Raha ny fanazavana voaray hatrany, efa nandrasan’ireo jiolahy teo akaikin’ny trano fonenany izy tamin’io fotoana nivoahany ny tranony io. Tao anatin’ny fotoana fohy ny nanatanterahan’ireo jiolahy ity fakana an-keriny ity. Tsy nisy basy nipoaka kosa nandritra ity fakana an-keriny ity fa norahonan’ireo jiolahy ity mpandraharana ity ka nampidirin’izy ireo tao anaty fiara 4×4.
Marihina fa fanindroany izao i Navaze Veldjee niharan’ny fakana ankeriny tahaka izao. Ny 24 mey 2018 izy sy ny vadiny no nisy naka an-keriny voalohany teny Ampasampito. Ny fiaran’izy mivady ihany no nampiasain’ireo jiolahy nitondrana azy ireo an-keriny. Navotsotr’ireo mpaka an-keriny teny an-dalana ramatoa vadiny raha notazonin-dry zalahy nandritra ny tapa-bolana kosa i Navaze Veldjee.
Hanome valisoa ny CFOIM
Hatramin’ny omaly hariva, tsy mbola nandrenesam-baovao mihitsy ny momba ny toerana nitondran’ireo mpaka an-keriny an’i Navaze Veldjee. Tsy mbola nahazoam-baovao ihany koa ny eo anivon’ny mpitandro filaminana, saingy araka ny fanazavana voaray, efa mandeha ny fikarohana ireo jiolahy tompon’antoka amin’ity raharaha ity. Nanamafy kosa ny eo anivon’ny CFOIM fa vonona hanome valisoa goavana ho an’izay olona manome vaovao marina (ny toerana itazonana ilay nalaina an-keriny, ny momba ireo mpaka an-keriny, ny fiara nampiasain’izy ireo…) azo hanampiana ny mpitandro filaminana amin’ny fikarohana ireto jiolahy mpaka an-keriny ireto. Mijanona ho tsiambaratelo tanteraka ny momba ireo olona manome vaovao ny CFOIM, araka ny nambaran’izy ireo. Efa migadra avokoa ny ankamaroan’ireo jiolahy raindahiny amin’ny resaka kidnapping, ankoatra ireo maty voatifitry ny polisy sy ny zandary, saingy tsikaritra fa misy mandehaleha ety ivelany ny sasany amin’izy ireo ary mety ho anisany nahatonga izao fakana an-keriny niverina tampoka izao indray, raha ny fanampim-baovao nomen’ny loharanom-baovao marim-pototra iray. “I Lama, raindahiny amin’ny fanaovana fakana an-keriny izao, no miriorio any ka mety ho isan’ny tompon’antoka amin’izao raharaha izao”, hoy hatrany ity loharanom-baovao iray ity.